John Witherspoon kwuru na Boondocks na -alaghachi maka oge 5 - Pop Culture
John Witherspoon kwuru na Boondocks na -alaghachi maka oge 5
Vidiyo pụọ Obere vidiyo JRE
Ndị Boondocks na -alaghachi na obere ihuenyo ... dị ka John Witherspoon si kwuo.
N'ajụjụ ọnụ a gbara n'oge na-adịbeghị anya na pọdkastị Joe Rogan, onye na-eme ihe nkiri dị afọ 77 kwuru na usoro ihe nkiri na-adịghị asọ oyi ga-alaghachi maka oge 5. Witherspoon kwupụtara akparamagwa nkeRebert Jebediah 'Granddad' Freeman n'ime oge ihe nkiri anọ ahụ. Ndị Boondocks Ihe omume ikpeazụ bidoro na June 2014 na Swim Adult.
'Anọ m na katuun - gịnị ka ọ bụ? Ndị Boondocks ? Agbanweghị m olu m Ndị Boondocks, ' Witherspoon kwuru mgbe ọ na -akọwa etu o si anọgidesi ike na onwe ya na ọrụ ọ bụla . 'Ha na -alaghachi: Ndị Boondocks na -abịaghachi ... Ọ bụ otu n'ime katuunu kacha mma m hụtụrụla. '
travis scott fragment 1s ụbọchị mwepụta
Swim ndị okenye ekwenyebeghị Ndị Boondocks 'revival, n'agbanyeghị na enweela ọtụtụ ntule maka nlọghachi ya n'afọ ndị na -adịbeghị anya. Usoro a dabere na ihe ọchị ọchị nke AaronMcGruder wee malite na ngwụsị 2005. Onye isi McGruder wepụtara oge atọ mbụ, mana ọ laghachighị maka nke anọ.
'Dị ka ụwa maara ugbu a, Ndị Boondocks ọ ga -alọta maka oge nke anọ, mana agaghị m eji ya lọta, 'ka o dere na nkwupụta.' Ọ ga -amasị m ikele ekele m maka Sony na Adult Swim maka nnukwu oge atọ. M kere Ndị Boondocks afọ iri abụọ gara aga na kọleji, mere ihe ọchị kwa ụbọchị maka afọ isii, ma bụrụ onye na -eme ihe nkiri n'usoro ihe nkiri maka oge atọ mbụ. Ndị Boondocks mara mma nke ukwuu na -anọchite anya ọrụ ndụ m ruo ugbu a [...] Ihota nnukwu onye ọcha, 'Hollywood bụ azụmahịa.' '
Tupu afọ a, McGruder wepụtara isii ọhụrụ Ụgbọ elu Ihe nkiri na -atọ ọchị nke kwupụtara ihe niile site na nchịkwa Trump ruo nyocha Mueller na mmegharị #MuteRKelly.
Charlamagne tha Chineke kesara ibe ya na akaụntụ Instagram ya, yana ozi sitere na McGruder:
onye neville lụrụ na harry potter
'Mee ihe ndị a maka ị funụrị ọ (ụ (na ịhụ ma m ka nwere ike). Ndị ọzọ ị ga -abịa… Iberibe ndị a ga -ekwe omume naanị n'ihi nnukwu onyinye nke ezigbo enyi m Seung Kim, onye mere ihe nkiri maka ihe nkiri ochie - ọ bụ onye na -arụsi ọrụ ike. Ekele ya na ekele Charlamagne maka iwepụta m ihe ndị a ka m na -emekọ ihe ọnụ m instagram.
kill bill vol 3 ụbọchị mwepụta
kedu ihe ị chọrọ ime fondant
kedu ka m si zute nne gị netflix na -apụ